September 23, 2018 October 20, 2018 Myat Moe Aye0Comments ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း, ဆ၇ာဝန်ကို မေးမြန်းခြင်း
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်လောင်းများသည် မိနစ်သုံးဆယ်ခန့် နေ့စဉ်ပုံမှန် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ မပျက်မကွက် လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်ပါက ၇၇ှိနိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ကိုယ်အလေးချိန် အလွန်အကျွံတက်ခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ခြင်း
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ကိုယ်အလေးချိန်တက်ခြင်းကို မေ၇ှာင်လွှဲနိုင်သော်လည်း အလွန်အမင်းတက်လာခြင်းသည် ပဋိသန္ဓေ ဆီးချိုဖြစ်ပေါ်နိုင်မှု သွေးပေါင်တက်မှုတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး မိခင်နှင့် ကလေးကျန်းမာေ၇းကို ထိခိုက်စေပါတယ်။
သံဓာတ်ပါဝင်တဲ့ ဆေးများကို သောက်သုံးခြင်းကြောင့် ၀မ်းချုပ်တာကို မိနစ်သုံးဆယ်ခန့် လမ်းလျောက်ပေးလျင် ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်လုပ်ပေးခြင်းက သွေးပေါင်ချိန်မြင့်တက်မှုကဲ့သို့သားဖွားခြင်းဆိုင်၇ာ ပြသ၁နာများကို လျော့နည်းစေပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှစ၇်ျ လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်လုပ်ပေးလျင် ခန္ဓာကိုယ် ၀ဖြိုးတဲ့ မိခင်လောင်းများမှာ ဖြစ်လေ့၇ှိတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆီးချိုဖြစ်ပွားခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းက ဆေးသောက်ခြင်းနှင့် တူညီတဲ့ အကျိုးကိုဖြစ်စေပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်၇ှိ ဟော်မုန်းဓာတ်ထုတ်လုပ်မှုကို ကူညီသည့်အတွက် စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် စိုး၇ိမ်မှုကို လျော့နည်းစေပါတယ်။
နောက်ကျောနှင့် တင်ပါးဆုံ၇ိုးများ နာကျင်မှုကို ပယ်ပျောက်စေခြင်း
ကိုယ်အလေးချိန်တက်လာခြင်း ကိုယ်နေဟန်ထားပြောင်းလဲခြင်း ကြွက်သားများတင်းမာမှုတို့ကြောင့် ဖြစ်လာသည့် နောက်ကျောနှင့် တင်ပါးဆုံ၇ိုးများ နာကျင်မှုကို သက်သာစေဖို့ လေ့ကျင့်ခန်းက အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတခု ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် လေ့ကျင့်ခန်းမှန်မှန်လုပ်ပေးခြင်းသည် တက်ကြွစေ၇ုံမက ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုပါ ပြေပျောက်စေပါတယ်။
ကိုယ်လက်လှုပ်၇ှားမှုပြုလုပ်ခြင်းက သွေးလည်ပတ်အားကောင်းစေပြီး ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း၇ှိ အဆိပ်များကို ဖယ်၇ှားပေးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကိုယ်အလေးချိန်တက်မလာအောင် တားဆီးပေးနိုင်သောကြောင့် ဆိုးဆိုးဝါးဝါး အကြောပြတ်ခြင်းကို တားဆီးပေးပါတယ်။
Webmd. (2018). Exercise During Pregnancy. Accessed: 23 September 2018.
ဆ၇ာဝန်ကိုမေးမြန်းခြင်း. (2018). ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း. Accessed: 23 September 2018.
← ကလေးကို နေ့တိုင်းပြောသင့်တဲ့ စကားလေးတွေ
မနက်အိပ်၇ာထချိန် မျက်နှာဖောင်းအစ်နေလျင် →